Hevitr’ireo depiote sasany:TSY LAHARAM-PAHAMEHANA NY FANOMEZANA 4x4 -
AccueilRaharaham-pirenenaHevitr’ireo depiote sasany:TSY LAHARAM-PAHAMEHANA NY FANOMEZANA 4×4
Ilaina ny fahazoana ilay fiara tsy mataho-dalana avy amin’ny fanjakana, saingy mbola tsy fotoana tokony hitakiana izany izao, raha ny hevitr’ireo solombavambahoaka izay nandany ilay lalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana 2017. Ny fanalefahana ny fahasahiranan’ny vahoaka malagasy mantsy no tokony himasoan’ireo nomena fahefana rehetra raha ny hevitr’izy ireo. Tsy rariny raha toa ka ny depiote hisonanika ao anaty fiara raitra sy tsy mataho-dalana, fa ny vahoaka kosa ho fatin’ny hanoanana raha ny hevitry ny solombavambahoaka voafidy tany amin’ny distrikan’i Betroka. Tsapa ho maivan-danja ny fitakian’ireo parlemantera ity fiara ity, raha ampitahaina amin’ny zava-misy iainan’ireo vahoaka nifidy azy raha ny nambaran’ireo parlemantera sasany. Miendrika fitiavan-tena araka izany ny fisisihan’ireo solombavambahoaka sasany mitaky ny ahazoana ity fiara tsy mataho-dalana ity.
Nivaky ireo solombavambahoaka fa fitakiana tsy mitombina ihany koa, satria saika efa manana ny fiarany manokana avokoa ireto olom-boafidy ao amin’ny antenimieram-pirenena ireto. Misy amin’izy ireo aza no efa manana ireny karazana fiara lafo vidy ireny satria vao nivoaka ny orinasa nanamboarana azy. Finiavana te hambotry vahoaka araka izany izao fihetsika ataon’ireo solombavambahoaka sasany izao. fihetsika mamohehitra, satria tsy mahalala afa-tsy ny tenany raha ny hevitr’ireto mamany hatrany. Noho io antony io no nahatonga ireo maro an’isa tsy nankasitraka ny nampidirana ny fividianana ilay fiara 4×4 tao anatin’ilay teti-bolam-panjakana ampiasaina mandritra ny taona 2017. Tranga izay nampimenomenona ireo parlemantera sasany. Ny tombontsoa ho azy mantsy aloha no laharam-pahamehana ho azy ireo, vao ny tombontsom-bahoaka nanaovany lokaloka sy fampanantenana maro nandritra ny fampielezan-kevitra nataony.
Miketrika mafy ny hamakiana ny kianjan’ny 13 Mey ry Rossy sy Sareraka. Ho potika indray aloha izany ny tanànan’Antananarivo tahaka ny zava-nitranga nandritra ireo fanonganam-panjakana ny taona 1991 sy 2002 ary 2009. Ho may kila ...Tohiny